Egwuregwu ọkụ na-agbanye n'ọkụ nke Aluminom oge na 200 * 1200kg ikike
Home / Ọkụ na-ekpo ọkụ / Ogbugba oku nke alumini / 200 ^ 1200kg Mid Frequency Aluminom agbaze Ọkụ
200 ^ 1200kg Oge ikuku na-agbanye n'ọkụ
Categories: Ogbugba oku nke alumini, Ọkụ na-ekpo ọkụ, Ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ Tags: 500kg Mgbaze ọkụ nke Aluminom, Mkpụrụ obi nke ọtụtụ okpukpu ala nke oge okpomọkụ, Okpukpo ala nke alumini na agbaze, Umu ahihia umu oku, Eji ọkụ ọkụ ọkụ na-agbanye ọtụtụ ugboro, Ugbo Ogugu Ugbua, n'etiti ọkụ ọkụ ọkụ, mmelite ugboro ugboro
200kg ^ 1200kg A na-ejikarị ọtụtụ igwe na-agbaze igwe na-ekpo ọkụ ma na-eme ka ọkụ dị ala nke na-adịghị na ferrous metal, dịka aluminom, ọla kọpa, zinc, lead, tin, cadmium na alloys ndị ọzọ.
Njikọ njikọ Na-adịkarị ụgbụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ na-agbaze ọkụ ọkụ nke aluminum na-eme ka e jiri ya rụọ ọrụ nke ọma iji mee ka ígwè dị nro dị ala, na-arụ ọrụ kpọmkwem okpomọkụ ma na-ekesa okpomọkụ. Nke a dị oké mkpa n'ịgbaze ọla ndị dị otú ahụ dị ka aluminom ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịchekwa oge ndụ nke aluminom na àgwà ya. Mmiri ọkụ na-ekpo ọkụ maka aluminum ga-enye nchebe okpomọkụ dị oke iji nweta ihe mgbaru ọsọ a.
Auru nke electromagnetic Mid Frequency aluminum Mgbaze oku na ntinye:
Igwe mmepụta nke electromagnetic site na mmepe na ntozu nke teknụzụ, usoro mmepụta na teknụzụ nke ngwa, ngwanrọ, dịka nchebe a pụrụ ịdabere na nke ike ugbu a nwere ike ịbụ 2-200KW.
Ike ikpo ọkụ nke ọnụọgụ abụọ nke SMJD Njikọ n'etiti oge nke aluminom na-agbaze ọkụ: